စကျမှု့လုပျငနျး နှငျ့ စကျမြား စကျယန်တရား နှငျ့ အပိုပစ်စညျးမြား
ပွညျတှငျးစီးပှါးရေးသတငျး	ပွညျပစီးပှါးရေးသတငျး	Marketing ဆောငျးပါးမြား	Management ဆောငျးပါးမြား	အောငျမွငျသူမြား	အထှထှေေ စီးပှားရေး ဆောငျးပါးမြား	Marketing Plan ဘယ်လိုရေးမလဲ
Myanamar စားအုန်းဆီ ဈေးကွက်
Cash Flow Management ဝင်ငွေလည်ပတ်စီးဆင်းမှု
Products တွေရောင်းအားတက်စေမယ့် 21 ရာစု နည်းလမ်း
Business မလုပ်ခင် ကြိုတင် စဉ်းစားရန်
Japan,Singapore,Myanmar ပူးပေါင်းသည့် ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ
Market ဖွင့်ပုံ ခြုံငုံကြည့်တဲ့အမြင်
Createasuccessful team	ASEAN Economic Community (AEC)	Meeting with Ministry of Information (MOI) Nay Pyi Taw.	responsive carousel
Marketing ဆောငျးပါးမြား	<< < 1234>>>	Marketing Plan ဘယ်လိုရေးမလဲ
Marketing Plan တစ်ခု ရေးတော့မယ် ဆိုရင် ကျမ လေ့လာ ၊ သင်ယူ မိသလောက် ဖတ်မိသလောက် ဘာတွေ မဖြစ်မနေပါမလဲ ဆိုတော့
1) Executive Summary2) Situational Analysis3) Objectives4) Strategy5) Tactics6) Action Plan နဲ့7) Control တို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲ့ဒီမှာ နံပါတ် 1) ကို ခဏထားခဲ့ပြီး ကျမ နံပါတ် 2) Situational Analysis ကို အရင်ဆွေးနွေးပါမယ်။ ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် စေ ....Read more	7 Ps Marketing (ဈေးကွက်စီးပွားရေး မဟာဗျူဟာများ)
Marketing ဆိုတာ လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ မိမိထုတ်ကုန်၊ ၀န်ဆောင်မှု နှင့် ဖောက်သည်အကြား ဆက်သွယ်ပေးနိုင်တာ Marketing ကသာ အခရာဖော်ဆောင်ပေးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာတော့ Everything is Marketing လို့ဆိုပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ ....Read more	Social Media ကိုသုံးပြီး ဈေးကွက်ဘယ်လိုထိုးဖောက်)
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂ဝ၁၄မှ စတင်၍ တန်ဖိုးနည်းမိုဘိုင်းဆင်းကဒ်များ ဈေးကွက်သို့ စတင်ရောင်းချလာသည်မှစ၍ သတင်းနှင့်နည်းပညာအချက်အလက်များ တဟုန်ထိုးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါသည်။ လူဦးရေ ၅၆သန်းကျော်ရှိသည့်အနက်မှ ဆင်းကဒ် ၄၃.၇၂သန်း ....Read more	Customer များနှင့် လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ခြင်း
သင့် ဖောက်သည်များနဲ့ ပုပေါင်းပြီး လုပ်ငန်းကို တည်ဆောက်ပါ။
စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ဖို့ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ ခေါင်းအကိုက်ရဆုံးက လုပ်ငန်းစတင် လည်ပတ်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးတစ်ခုကို ရှာဖေ& ....Read more	ကုနျသှယျရေး
စားအုန်းဆီ ဈေးနှုန်း ထပ်မံမြင့်တက်၊ ကြိုရောင်း၊ ကြိုဝယ်လုပ်ငန်း များတွင် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်မှု ဖြစ်ရန် အခြေအနေများ ရှိလာနိုင်
မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ ရန်ကုန်ဆီ ဈေးကွက်တွင် စားအုန်းဆီ D.O စာရွက်(ဆီထုတ်ယူခွင့်) တစ်ပိဿာ လက်ကား ရောင်းဈေး ၁,၅၈၅ ကျပ်၊ လက်ကားအလှယ် လက်ငင်း တစ်ပိဿာ ၁,၆၀၅ ကျပ ....Read more	Trade Border Zone နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးသစ် ခုနစ်ခု
ပဲကုန်သည်များ ကြိုပွိုင့်စနစ် မပြုလုပ်&#
မိမိကိုယ် မိမိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း (Invest Mar 27,2017
Export/Import အခွန်ကို တစ်ပတ်စာ ပုံသေငွေလဲနှုန်းပြေ&#
Cash Flow Management ဝင်ငွေလည်ပတ်စီးဆင်းမှု စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
Cash Flow ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းဟာ စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် မသိမဖြစ် မတတ်လို့မဖြစ် အလွန်အရေးပါတဲ့အရည်အချင်းဖြစ်ပါတယ်။ Financial Statement တွေက ဖော်ပြနေတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေက သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအကြောင်းကို ဂဃနဏ ပြောပြနေတာကို နားလည်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ လူအ& ....Read more	Talent Management အရည်အချင်းစီမံခန့်ခွဲရေး
ဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှန်၊ နေရာမှန် ဖြစ်ဖို့ဟာ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေထဲမှာ အရှားပါးဆုံး၊ ဈေးအကြီးဆုံးတွေထဲမှာ ပါဝင်နေတာကတော့ အလုပ်အတွက် သင့်တော်တဲ့ လူတွေဖြစ်တယ်။ အရည်အချင်း စီမံခန့်ခွဲတတ်ရင် ဒီလိုလူမျိုးတွေ စဉ်ဆက်Ɯ ....Read more	သတိထားသင့်တဲ့ အခြေခံ အချက် (၅) ချက် Own Business
Food အလုပ်အင်မတန်များသူတွေအတွက် စားသောက်မƧ
ပညာရှင် နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ...Article
ကျွန်မ နာမည်က ဝင့်ဝါပါ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ Sale & Marketing Leader တာဝန်ကို ယူထားပါတယ်။ အခုတစ်လော လုပ်ငန်းအပြိုင်အဆိုင်တွေကလည်း သိပ်များပြီးတော့ ရောင်းအားကလည်းကျ၊ Inquiry ကလည်းမလာဆိုတော့ Leader တာဝန်ယူထားတဲ့ ကျွန်မ အဆူခံထိတာပေါ့ရှင်။ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ အထက်က လူကြီးလည်း အဆူခံရတာပါပဲ။ ကျွန်မလည်း ....Read more	Rice Policy တွင် ရေးဆွဲသင့်သည့် အချက်များ
Business Plan တစ်ခုကို အကောင်းဆုံးရေးဆွဲခြင်း
သူဌေးတကယ်ဖြစ်မယ့် နည်းလမ်း Business Article
ဘယ်အလုပ်အတွက်မဆို 10 Career Readiness Skills
ရောငျးလိုသောကုနျပစ်စညျးကို ဖျောပွခွငျး ရောငျးသူကိုရှာရနျ ဝယျလိုသောကုနျပစ်စညျးကို ဖျောပွခွငျး Follow Us
copyright © 2017 www.baganmart.com. All right reserved. | Terms and Conditions | Blog